Shinkansen (बुलेट ट्रेन)! जापान पास, टिकट, ट्रेनहरूको परिचय - Best of Japan
Shinkansen बुलेट ट्रेनहरु Torikai रेल यार्ड, ओसाका, जापान = Shteterstock मा लाइन मा पंक्तिबद्ध
जापान मा, Shinkansen (बुलेट ट्रेन) को नेटवर्क फैलदै छ। शिन्कानसेन एक सुपर एक्सप्रेस हो जुन २०० किमि प्रति घण्टा भन्दा बढी छ। यदि तपाईं शिink्कन्सेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं जापानको प्रमुख शहरहरू बीच एकदमै छिटो सरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं हवाइजहाज प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंले एयरपोर्टबाट जानु पर्छ, त्यसैले आश्चर्यको रूपमा यो समय लिन्छ। यसको विपरित, Shinkansen प्रमुख स्टेशनहरू बीच यात्रा, ताकि तपाईं धेरै कुशलतापूर्वक यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं जापान मा Shinkansen सवारी आनन्द गर्नुपर्छ!
Shinkansen जापानी द्वीपसमूह को विभिन्न भागहरु मा संचालित छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका ट्रेनहरू छन्, नयाँ मोडेलदेखि "डाक्टर पहेलो" सम्म, जुन ट्र्याकहरू जाँच गर्दछ। Shinkansen समय मा ठ्याक्कै चल्छ। त्यसोभए किन यसलाई तपाईंको यात्रामा प्रयोग नगर्ने? कृपया Shinkansen को बारे मा निम्नलिखित लेख को संदर्भ गर्नुहोस् ...
Shinkansen नेटवर्क को रूपरेखा
छवि क्लिक गर्दा यो Shinkansen नक्शा एक अलग पृष्ठ मा जापान रेल पास को आधिकारिक वेबसाइट मा प्रदर्शित हुनेछ
कसरी Shinkansen टिकट बुक र खरीद गर्न
शिंकान्सेन टिकट आरक्षण र खरीद प्रक्रियाहरूको सम्बन्धमा, मैले निम्न लेखमा विवरणहरू प्रस्तुत गर्‍यो। जापान रेल पास सहित, कृपया विस्तृत जानकारीका लागि यस लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
Nozomi, Hikari, Kodama ... कति फरक छ?
शिन्कानसेन नेटवर्कमा एक लामो मार्ग छ जुन जापानी टापुमा प्रवेश गर्छ र यसबाट शाखा विस्तार गर्दै धेरै मार्गहरू समावेश गर्दछ।
शिंकान्सेन मार्गहरूमा, त्यहाँ रेलहरू छन् जुन केवल प्रमुख स्टेशनहरू र ट्रेनहरूमा रोकिन्छ जुन प्रत्येक स्टेशनमा रोकिन्छन्। उदाहरण को लागी, टोकियो र ओसाका जोड्ने Tokai Shinkansen मा, "Nozomi" "Hikari" केवल प्रमुख स्टेशनहरु मा र प्रत्येक स्टेशन मा "Kodama" रोकिन्छ। प्रत्येक रेल, सवारी साधनहरुमा लगभग उस्तै। जहाँसम्म, स्टेशनहरू रोक्नको संख्या फरक छ, आवश्यक समय फरक हुनेछ।
टोकैडो शिन्कानसेनको प्रत्येक रोकिन्छ। Nozomi स्टक स्टेशन को साथसाथ, Hikari केही स्टेशनहरु मा रोकिन्छ। कुन स्टेशन हिकारी रोकिन्छ यो ट्रेनमा निर्भर गर्दछ। टोकियो स्टेशनबाट शिन Osसाका स्टेशनको समय नोजोमीबाट २ घण्टा minutes2मिनेट, हिकारीबाट २ घण्टा minutes 33 मिनेट, कोडामाबाट hours घण्टा2मिनेटको हुन्छ। कोजामा Nozomi र Hikari स्टेशनहरु को लागी सम्म कुर्दै, स्टेशनहरु मा रोक्न समय लामो छ। नोजोमी र हिकारी प्रायः धेरै लामो खण्डमा चल्छन्। उदाहरण को लागी, जब टोकियो बाट छुट्ने, Nozomi र Hikari अक्सर हिरोशिमा वा हाकाटा जान।
स्टेशन Nozomi हिकारी कोडामा
टोक्यो रोक रोक रोक
शिनागावा रोक रोक रोक
Shinyokohama रोक रोक रोक
ओडवारा --- (रोक) रोक
अटामी --- (रोक) रोक
मिशिमा --- (रोक) रोक
शिन फुजी --- --- रोक
शिजुओका --- (रोक) रोक
काकेगावा --- --- रोक
हमामासु --- (रोक) रोक
टोयोहाशी --- --- रोक
मिकावा अन्जो --- --- रोक
नागोया रोक रोक रोक
Gifu Hashima --- (रोक) रोक
माइबारा --- (रोक) रोक
क्योटो रोक रोक रोक
शिन ओसाका रोक रोक रोक
बुलेट ट्रेनमा सिफारिश गरिएको सिटहरू
प्रत्येक गाडीको अन्तिम सीट
दुर्भाग्यवश शिन्कानसेनसँग ठूलो सामान राख्ने थोरै ठाउँ छैन। यदि तपाईं एक ठूलो झोला संग एक Shinkansen सवारी, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछ कि तपाईं प्रत्येक गाडी को अन्त मा सीट मा बस्नुहोस्। यदि तपाईं अन्तिम सीटमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो सिट पछाडि आफ्नो झोला राख्न सक्नुहुन्छ।
साइड मा सीट जहाँ माउंट। फुजी देख्न सकिन्छ
यदि तपाईं टोकियोबाट ओसाका वा क्योटोमा जानुभयो भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं ठीक सिटमा बस्नुहोस्। माउन्ट फुजी दायाँ देखिन्छ। यसको विपरीत, यदि तपाईं ओसाका वा क्योटोबाट टोकियोमा सर्नुभयो भने, बायाँ पट्टि बस्नु MT.Fuji हेर्न सजिलो छ।
जापानमा शिन्कानसेन टिकटहरू खरीद गर्दा तपाईका कर्मचारीहरूलाई तपाईको इच्छा बताउन सक्नुहुन्छ। जेआर स्टेशनहरूमा स्थापना गरिएको टिकट भेन्डि machines मेशिनहरू पनि, तपाईं आफ्नो मनपर्ने सीट निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं जापान जानु भन्दा पहिले आफूले चाहेको सिट पाउन सक्नुहुन्न भने, कृपया पहिले जहाँसुकै सिट सुरक्षित गर्नुहोस्। त्यसो भए जापानी स्टेशनमा सिटहरू परिवर्तन गर्न परिचारकहरूलाई सोध्नु राम्रो हुन्छ।
टोक्यो - शिन-ओसाका: लाइन लम्बाई 515.4१XNUMX..XNUMX किलोमिटर
टोकैडो शिन्कानसेन बुलेट ट्रेन माउन्ट फुजी र फुजीकावा पुलबाट हुँदै निलो आकाश पृष्ठभूमिमा = शटरस्टक
टोकैडो शिन्कानसेनमा नोजोमी सब भन्दा द्रुत ट्रेन हो। यो टोकियो स्टेशन, Shinagawa स्टेशन, शिन-योकोहामा स्टेशन, नागोया स्टेशन, क्योटो स्टेशन, शिन ओसाका स्टेशन मा मात्र रोकिन्छ। त्यहाँ धेरै रेलहरू छन् जुन ओकायामा स्टेशन, हिरोशिमा स्टेशन, हकाता स्टेशन, इत्यादिमा रोकिन्छन्, शिन ओसाका स्टेशनको पश्चिममा सान्यो शिनकसेनमा पुग्छन्।
होजारी नोजोमी पछि सबैभन्दा द्रुत ट्रेन हो। हिकारीको गाडी नोजोमी जस्तै छ, तर यो Nozomi भन्दा बढी स्टेशनहरूमा रोकिन्छ। प्रत्येक ट्रेनको लागि स्टप फरक हुन्छ। केही Hikari सान्यो Shinkansen मा Okayama स्टेशन चलाउन।
Kodama सबै स्टेशन मा रोकिन्छ। Nozomoi वा Hikari पार नभएसम्म कोडामा स्टेशनमा पर्खन्छ, त्यसैले यसले आश्चर्यमा केहि समय लिन सक्दछ। यदि तपाईं कुनै स्टेशनमा जानुहुन्छ जहाँ कोडामा मात्र रोकिन्छ, तपाईं नजिकैको स्टेशन जानु पर्छ पहिले नोजोमी वा हिकारीबाट र त्यसपछि कोडामामा स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
शो: स्टेशनहरूको सूची हेर्न कृपया यो बटन क्लिक गर्नुहोस्
बोल्ड: नोजोमीको स्टप
शिन-ओसाका - हकाता: लाइन लम्बाई 553.7 XNUMX..XNUMX किलोमिटर
नोजोमी सब भन्दा छिटो रेल हो जुन दुबै टोकैडो शिन्कन्सेन र सान्यो शिनकसेन लाइनमा चल्दछ।
मिजोहो सबैभन्दा द्रुत ट्रेन हो जुन दुबै सान्यो शिंकान्सेन र क्युशु शिन्कानसेन लाइनहरूमा चल्दछ। यसले शिन-ओसाका स्टेशन र कागोशिमा-चुओ स्टेशनलाई दक्षिणी क्युशुमा अवस्थित कागोशिमा प्रान्तमा जोड्दछ। सान्यो शिन्कन्सेन भित्र, सबै ट्रेनहरू शिन-ओसाका, शिन-कोबे, ओकायामा, हिरोशिमा, कोकुरा र हकाता स्टेशनहरूमा रोकिन्छन्, र केही ट्रेनहरू हिमेजी स्टेशनमा पनि रोकिन्छन्। मिजुहो फुकुयामा स्टेशन, टोकुयामा स्टेशन, शिन यामागुची स्टेशनमा रोक्दैनन् जहाँ केही Nozomi रोकिन्छ।
सकुरा टोकैडो शिन्कानसेनमा शिकारी बराबरको ट्रेन हो। जसरी सकुरा Nozomi भन्दा केही थप स्टेशनहरूमा रोक्दछ, सकुरा Mizuho भन्दा केहि थप स्टेशनहरूमा रोकिन्छ। सकुरा तुलनात्मक रूपमा धेरै स्टेशनहरूमा रोकिन्छ, विशेष गरी क्युशु शिनकानसेन सेक्सनमा। स्टेशनहरू जहाँ सकुरा मिजुहो भन्दा बढी रोक्दछन् रेलमा निर्भर रहन्छ।
हिकारी (अर्ध-फास्ट / स्थानीय)
सान्यो Shinkansen मा Hikari को2प्रकारहरु चलिरहेका छन्। एउटा यस्तो प्रकार हो जुन टोकियो स्टेशनबाट सान्यो शिन्कानसेनमा आउँदैछ। यो नोजोमीको छेउमा टोकियो स्टेशनबाट शिन-ओसाका स्टेशनसम्म छिटो छ, तर यो शिन ओसाका स्टेशनबाट पश्चिम पट्टि प्रत्येक स्टेशनमा रोकिन्छ। यद्यपि हिकारीमा नागोयाबाट सान्यो शिन्कन्सेनमा प्रवेश गर्दा त्यहाँ रेलहरू छन् जुन सकुरा जस्तै धेरै स्टेशनहरू हुँदै जान्छन्।
अर्को एउटा ट्रेन हो जुन केवल सान्यो Shinkansen खण्डमा चल्दछ। यो धेरै स्टेशनहरु को रूप मा सकुरा को माध्यम बाट पार।
कोडामा प्रत्येक स्टेशनमा रोकिन्छ साथै टोकैडो शिन्कानसेनको कोडमा।
बोल्ड: Nozomi र Mizuho को स्टप
Nozomi कहिलेकाँही हिमेजी स्टेशन को केही स्टेशन मा रोकिन्छ, Fukuyama स्टेशन, Tokuyama स्टेशन, शिन Yamaguchi स्टेशन
शिन- Kurashiki स्टेशन
शिन- Iwakuni स्टेशन
हाकाता - कागोशिमा-चुओ: लाइन लम्बाई २256.8. km किलोमिटर
मिजुहो क्युशु शिन्कन्सेन र सान्यो शिन्कन्सेनमा यात्रा गर्न सबैभन्दा द्रुत ट्रेन हो। सबै रेलहरू हकता स्टेशन, कुमामोटो स्टेशन, कागोशिमा-चुओ स्टेशन क्युशु शिन्कानसेनमा रोकिन्छन्, र केही अस्थायी ट्रेनहरू कुरुमे र काउउची स्टेशनहरूमा पनि रोकिन्छन्। शिन-ओसाका स्टेशनबाट कागोशिमा-चुओ स्टेशन3घण्टा 42२ मिनेटमा सब भन्दा द्रुत ट्रेन छ। यो एक घण्टा १ 17 मिनेटको हाकाता स्टेशनबाट कागोशिमा-चुओ स्टेशन सम्म छ।
सकुरा अर्ध-द्रुत ट्रेन हो जुन कुशु शिन्कन्सेन र सान्यो शिन्कन्सेनमा चल्दछ। यो MIzuho भन्दा केहि थप स्टेशनहरूमा रोकिन्छ। क्युशु शिन्कन्सेनमा, सबै ट्रेनहरू हाकाता स्टेशन, शिन टार्सु स्टेशन, कुरुमे स्टेशन, कुमामोटो स्टेशन, कावची स्टेशन र कागोशिमा-चुओ स्टेशनमा रोकिन्छन्। र यो केही अन्य स्टेशनहरूमा पनि रोकिन्छ। स्टेशन रेल मा निर्भर गर्दछ।
त्सुबामे क्युशु शिन्कानसेनको सबै स्टेशनहरूमा रोकिन्छ।
बोल्ड: स्टेशन जहाँ मिजुहो रोकिन्छ
शिन- Yatsushiro स्टेशन
शिन- Minamata स्टेशन
कागोशिमा- Chuo स्टेशन
टोक्यो - शिन अओमोरी: लाइन लम्बाई 674.9..XNUMX किमी
अन्य मार्गहरूको शिनकानसेन सवारी साधनहरू प्राय: मुख्य मार्गका सवारी साधनहरूसँग जोडिन्छन् र बाटोमा टोक्यो, जापान = शटरस्टकमा सँगै सञ्चालित हुन्छन्।
तोहोकु शिन्कानसेन टोकियो स्टेशनबाट उत्तरपूर्व दिशामा। यो फुकुशिमा स्टेशन, सेन्दै स्टेशन, मोरियोका स्टेशन, आदि हुँदै जान्छ र होन्शुको उत्तरी भागमा शिन अओमोरी स्टेशन पुग्छ। शिन अओमोरी स्टेशनबाट, होक्काइडो शिन्कानसेन जारी छ। तोहोकु शिन्कानसेनमा दुई शाखा लाइनहरू छन्। यो अकिता शिन्कानसेन र यमगाता शिन्कानसेन हो। यी ट्रेनहरू तोहोकु शिन्कन्सेनको तोहोकु शिन्कानसेनबाट शाखा शाखामा पुग्न मुख्य रेलहरूसँग जोडिएका छन्। त्यसोभए, यदि तपाईं यी शिink्कनसेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, कृपया जब तपाईं बोर्ड गर्नुहुन्छ ट्रेनलाई गल्ती नगर्न सावधान हुनुहोस्।
तोयाकू शिन्कन्सेन र होक्काइडो शिन्कानसेन (टोक्यो स्टेशनबाट शिन-हाकोडाटे-होकोटो स्टेशन सम्म) को माध्यमबाट चालु हुँदै हियाबुसा सब भन्दा छिटो शिनकसेन हो। यो 320२० किमी प्रति घण्टाको अधिकतम गतिमा चल्दछ। हायाबुसासँग केवल सिटहरू छन्। त्यहाँ हायाबुसामा साधारण कार (अर्थव्यवस्था), हरियो कार (प्रथम श्रेणी) र भव्य वर्ग छन्। एउटा ठूलो श्रेणीको क्यारिजमा प्रति प row्क्ति मात्र तीन सीट हुन्छ।
यामाबिको थोरै द्रुत रेल हो जुन टोकियो स्टेशन - सेन्दै स्टेशन र मोरियोका स्टेशन (दुई प्रकारका अन्त्यबिन्दुहरू, सेन्डाइ र मोरियोका बीच) संचालित हुन्छ। यो मुख्यतया Ueno स्टेशन, Omiya स्टेशन, Utsunomiya स्टेशन, Koriyama स्टेशन, Fukushima स्टेशन र सेंडाई स्टेशन - मोरियोका स्टेशन मा रोकिन्छ।
Hayate एक ट्रेन हो जसको स्थिति वर्तमानमा बुझ्न गाह्रो छ। यो पहिले सब भन्दा द्रुत ट्रेन थियो। यद्यपि, हायाबुसा बाहिर आएदेखि यसलाई हायाबुसाको पूरक ट्रेनको रूपमा राखिएको थियो। निकट भविष्यमा, यस्तो देखिन्छ कि तोहोकु शिन्कन्सेनमा कुनै नियमित सेवा हुनेछैन। यो मुख्यतया होक्काइडो Shinkansen को आसपास संचालित हुनेछ।
कोमाची (अकिता शिन्कानसेन)
कोमाची अकिता शिन्कानसेनको गाडी हो। अकिताबाट टोकियो जाँदा, यो तोहोकु शिन्कन्सेन सेक्सनमा तोहोकु शिन्कानसेन गाडी, हायाबुसासँगै सञ्चालन हुने छ। त्यसोभए यो मोरिओका स्टेशनमा हायाबुसाबाट अलग गरिएको छ र यो अकिता स्टेशनमा सञ्चालन हुन्छ।
त्सुबासा (यामगाता शिन्कानसेन)
त्सुबासा यमगाता शिन्कानसेनको गाडी हो। टोक्योबाट यमगाटा जाँदा, यो यामाबिको सँगै संचालित हुनेछ जुन तोहोकु शिन्कानसेनको सेक्सनमा तोहोकु शिन्कानसेन कार हो। त्यसो भए यो फुकुशिमा स्टेशनको यामाबिकोबाट अलग गरियो र यो यमगाता प्रान्तमा संचालित हुन्छ। त्यहाँ अन्तिम बिन्दुको दुई प्रकार छन्: यामगाता स्टेशन र शिन्जो स्टेशन।
Nansuno एक स्थानीय ट्रेन हो कि टोक्यो स्टेशन - Nasushiobara र Koriyama स्टेशन बीच चल्छ। यो मुख्यतया तोचिगी प्रान्त - बिहान र साँझ टोक्यो केन्द्रीय शहर बीच माग गर्न मेल खान्छ।
बोल्ड: स्टेशनहरू जहाँ Hayabusa रोकिन्छ। केहि अन्य स्टेशनहरु मा रोकिन्छ
टोकियो स्टेशन (टोक्यो)
ओमिया स्टेशन (सैतामा प्रान्त)
Oyama स्टेशन (तोचिगी प्रिफेक्चर)
Utsunomiya स्टेशन (तोचिगी प्रिफेक्चर)
नासुशीओबारा स्टेशन (तोचिगी प्रिफेक्चर)
शिन शिराकावा स्टेशन (फुकुशिमा प्रान्त)
कोरियामा स्टेशन (फुकुशिमा प्रान्त)
शिरोशी-जाओ स्टेशन (मियागी प्रान्त)
सेंडाई स्टेशन (मियागी प्रान्त)
फ़ुरुकावा स्टेशन (मियागी प्रान्त)
Kurikomakogen स्टेशन (मियागी प्रान्त)
Ichinoseki स्टेशन (Iwate प्रान्त)
मिजुसावा-एसाशी स्टेशन (इवाटे प्रान्त)
Kitakami स्टेशन (Iwate प्रान्त)
शिन हानमाकी स्टेशन (Iwate प्रान्त)
मोरियोका स्टेशन (इवाटे प्रान्त)
Iwate-Numakunai स्टेशन (Iwate प्रान्त)
निनोहे स्टेशन (Iwate प्रान्त)
Hachinohe स्टेशन (Aomori प्रान्त)
Shichinohe-Towada स्टेशन (Aomori प्रान्त)
शिन अओमोरी स्टेशन (अओमोरी प्रान्त)
मोरियोका - अकिता: रेखा लम्बाई १२127.3..XNUMX किमी
तोहोकु शिन्कन्सेनबाट मोरिओका स्टेशनमा अकिता शिन्कन्सेन शाखाहरू र अकिता प्रान्तमा चल्छन्। यो टोकियो स्टेशन देखि मोरियोका स्टेशन सम्म चल्छ हयाबुसासँग 320२० किलोमिटरको अधिकतम गतिमा जडित। यद्यपि यो मोरिओका स्टेशनबाट अकिता स्टेसन सम्म नियमित रेलको ट्र्याकहरू हुँदै जान्छ, अधिकतम गति १ 130० किलोमिटरमा सीमित हुन्छ।
फुकुशिमा - यामागाता - शिन्जो: रेखा लम्बाई १148.6. km किलोमिटर
यामागाता शिन्कन्सेन फुकुशिमा स्टेशनबाट तोहोकु शिन्कानसेन शाखा र यमगाता प्रान्तमा चल्दछ। यो टोक्यो स्टेशनबाट फुकुशिमा स्टेशनसम्म चल्दछ जुन यामाबिकोसँग जडित छ। यद्यपि यो फुकुशिमा स्टेशनबाट शिन्जो स्टेशन सम्म नियमित रेलको ट्र्याकमा चल्छ, यस खण्डमा अधिकतम गति १ 130० किलोमिटर मात्र सीमित छ।
शिन अओमोरी - शिन-हाकोडाटे-होकुटो: मार्ग दूरी .360.3 XNUMX०..XNUMX किमी
हाल शि the्कसेनसेनको उत्तरी टोकरी दक्षिणी होक्काइडोमा शिन-हाकोडाटे-होकोटो स्टेशन हो। शिन-अओमोरी स्टेशनदेखि होन्शुको उत्तरी भागमा शिन-हाकोडाटे-होकोटो स्टेशनसम्मको सेक्सन होक्काइडो शिन्कन्सेन भनिन्छ। होन्शुबाट होक्काइडो जाँदा, शिink्कनसेन समुन्द्रको फेदमा सुरुnel भएर जान्छ। भनिन्छ कि होक्काइडो शिन्कानसेन २० 2031१ तिर सप्पोरोमा विस्तार गरिने छ।
Hayate मोरियोका - शिन अओमोरी - शिन-हाकोडाटे-Hokuto स्टेशन बीच संचालित छ।
शिन-हाकोडाटे-होकोटो स्टेशन (होक्काइडो)
शिन-अओमोरी स्टेशन (एमोरी पीrefecture)
टोक्यो - टाकासाकी - कनाजावा: मार्ग दूरी 345.5 XNUMX. km किलोमिटर (टाकासाकी - कानाजावा)
Hukuriku Shinkansen जापान समुद्री किनारको कनाजावामा चलिरहेको, इशिकवा प्रान्त, जापान = शटरस्टक
होकुरीकू शिन्कन्सेन एक नयाँ शिन्कानसेन हो जसको योजना टोकियो स्टेशनबाट शिन - ओसाका स्टेशन जापानको सागरपट्टिको क्षेत्र (जापानको होकुरीकु भनिन्छ) हुँदै जान्छ। हालमा, होकुरिकु शिन्कन्सेनको टोकियो स्टेशनदेखि इजिकावा प्रान्तको कानाजावा स्टेशन सम्मको सेक्शन छ। यो टोकियो स्टेशनबाट टाकासाकी स्टेशनसम्म जान्छ, जोएत्सु शिन्कन्सेनको उही लाइन, र टाकासाकी स्टेशनबाट पश्चिममा शाखाहरू।
Hoguriku Shinkansen मा कागयाकी सब भन्दा द्रुत ट्रेन हो। यो टोकियो स्टेशन, Ueno स्टेशन, Omiya स्टेशन, नागानो स्टेशन, Toyama स्टेशन र Kanazawa स्टेशन मा रोकिन्छ। कागयाकी प्रयोग गरेर, यसले २ घण्टा २2मिनेट टोक्यो स्टेशनबाट कजाजावा स्टेशन जान्छ।
हाकुतका ह्कुरीकु शिन्कन्सेन लाइनको कागयाकी पछाडिको द्रुत रेल हो। यो टोकियो स्टेशन देखि नागानो स्टेशन को लागी कागयाकी जस्तै लगभग समान गतिमा चल्छ, तर नागानो स्टेशनबाट कानाजावा स्टेशनसम्म यो प्रत्येक स्टेशनमा रोकिन्छ।
Asama टोक्यो स्टेशन र नागानो स्टेशन बीच संचालित एक ट्रेन हो। यो मूल रूपमा यो सेक्सनको प्रत्येक स्टेशनमा रोकिन्छ। यस सेक्सनमा धेरै यात्रीहरू भएकोले, आसामले ती आवश्यकताहरूको जवाफ दिन्छ।
त्सुरुगी एक स्थानीय ट्रेन हो जुन टोयामा स्टेशनबाट कानाजावा स्टेशन सम्म पुग्छ।
बोल्ड: कागयाकीको स्टप
अन्नाका - Haruna स्टेशन
टोकियो - ओमिया - निगाता: मार्ग दूरी २269.5 .XNUMX। Km किमी (ओमिया - निगाटा)
जोएत्सु शिन्कन्सेन शिंकान्सेन लाइन हो जुन टोकियो स्टेशनबाट उत्तर तिर निगता स्टेशनमा जान्छ। कडा शब्दमा भन्नु पर्दा यो टोकियो स्टेशन होइन, तर ओमिया स्टेशनबाट आउँदछ, तर सबै ट्रेनहरू टोकियो स्टेसनमा ड्राईभ गरिरहेको हुनाले यसलाई सामान्यतया टोकियो स्टेशनबाट निगाटा स्टेशन सम्म संचालित शिन्कन्सेन मानिन्छ।
जोएत्सु शिन्कानसेन एक शिन्कानसेन लाइन हो जुन टोकियो स्टेशनबाट उत्तरपट्टि निगाटा स्टेशनमा जान्छ। कडा शब्दहरुमा भन्नु पर्दा यो पूर्वी स्टेशन होईन, तर ओमिया स्टेशन बाट आउँदछ, तर सबै ट्रेनहरु टोकियो स्टेशन को लागी ड्राइभ गरीएको छ, यो सामान्यतया टोकियो स्टेशन बाट Niigata स्टेशन को लागी संचालित Shinkansen मानिन्छ।
तनिगावा एक ट्रेन हो जुन टोकियो स्टेशन र इचिगो युजावा स्टेशन बीच चल्छ र प्रत्येक स्टेशनमा रोकिन्छ।
तनिगावामा सामान्य प्रकारको सवारीका अतिरिक्त दुई-मंजिला सवारी साधनहरू पनि छन्। दुई-मंजिला रेललाई "अधिकतम तनिगावा" भनिन्छ।